मासु नखाने सैनिकलाई शाकाहारी मेन्यु ! ब्यारेकमा बल्ल हट्यो मट्टीतेल ब्रेकफास्टमा हरेक दिन अण्डा, पाउरोटीको पनि व्यवस्था | सुदुरपश्चिम खबर
मासु नखाने सैनिकलाई शाकाहारी मेन्यु ! ब्यारेकमा बल्ल हट्यो मट्टीतेल ब्रेकफास्टमा हरेक दिन अण्डा, पाउरोटीको पनि व्यवस्था
सैनिक ब्यारेकमा पहिलोपटक शाकाहारी रासनको आपूर्ति हुन थालेको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सैनिक अधिकृत तथा सकलदर्जाको रासनलाई स्तरीय र पोषणयुक्त बनाउने अभियानअनुसार नयाँ रासन स्केल लागु गरेका हुन् ।
‘मन्त्रिपरिषदले नयाँ रासन स्केल स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ’, पौडेलले भने । शाकाहारीका लागि मासुसरहको प्रोटिन चाहिने भएकाले उनीहरुको रासनको मात्रा बढाइएको पौडेलले जनाए ।
‘मासु खानेले चारचोटिसम्म पाउँछन् भने शाकाहारीलाई ६ चोटिसम्म खान पुग्छ’, पौडेल भन्छन्, ‘यद्यपि, खानासम्बन्धी रुटिन सम्बन्धित पल्टनले नै बनाउँछ ।’
नेपाली सेनाको कुल जनशक्तिमध्ये ५ प्रतिशत शाकाहारी रहेको एक अध्ययनले देखाएको थियो ।
महामारीबीच सेनाको एकीकरण मार्ग अभियान
सैनिक अपरेशन, विपद् व्यवस्थापन तथा तालिम र अभ्यासहरुमा फौज परिचालन हुँदा बाहिरै बस्नुपर्ने भएकाले त्यसबेला आवश्यक पर्ने खानेकुरा झोलामा बोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । त्यसलाई ‘मिल्स रेडी टु इट’ (एमआरई) भनिन्छ ।
पहिले यसको व्यवस्थापन सेनाका ब्यारेकले आन्तरिकरुपमा गर्ने गरे पनि ग्यासको प्रयोग थालिएसँगै बचेको पैसा यसमा प्रयोग गरिएको हो । यसका लागि अर्थले स्वीकृति दिइसकेको छ ।
एमआरईका लागि पनि लञ्च, खाजा र डिनरको बेग्लाबेग्लै व्यवस्था छ । बिहानको खाजामा चिया रङ, चिनी, दूध पाउडर, बिस्कुटलगायत छ भने खानामा चिउरा, चाउचाउ, क्यान फिस र शाकाहारीलाई फ्रुट ककटेलको व्यवस्था छ । दिउँसो खाजामा जुसको प्याकेट, बिस्कुटलगायत छ भने बेलुकीको खानामा बिहानमा झैँ व्यवस्था गरिएको छ ।
‘यो सेनाको रासनमा हालसम्मकै सबैभन्दा उल्लेखनीय परिवर्तन हो’, जंगीअड्डाका एक अधिकृत भन्छन् ।
‘पौष्टिक बिस्कुट भनेर २०र२५ करोड उडाउँदै थियो । मैले सेनालाई भनेँ – के बिस्कुट किनिराख्या ? पाउरोटी, साउरोटी केके हुन्छ आफैं बनाऊ न । १५ दिन तालिम लिँदा हुने कुरा । आफैं यसो गोलमा सेकाएपछि भुक्क भइहाल्छ । भइगो नि । त्योभन्दा पौष्टिक के हुन्छ ? ताजा खाने नि,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।
बिस्कुट छाडेर पाउरोटी खान थालेपछि सेना बलियो भएको उनले दाबी गरेका थिए । ‘पौष्टिक बिस्कुट खान छोड्यो । आफैंले बनाएको केक खान्छ । आफैं बनाएर खाउ भनेपछि अहिले सेना अलि बलियो भएको छ । तागतिलो भएको छ’, ओलीको भनाइ थियो ।
जंगीअड्डाका अनुसार बेकरीलाई ८० हजार रुपैयाँसम्म परेको छ । यसबाट पाउरोटी, मफिन, कुकिजलगायत सैनिक ब्यारेकमा तयार हुने गरेको छ/ – onlinekhabar